Ciidamada ammaanka ee Soomaaliland oo xabsiga utaxaabay Fannaan da'yar | KEYDMEDIA ONLINE
23 September 2021 Kenya iyo Qatar oo wada hadal uga furmaya Doha
23 September 2021 Beeraleyda Sh/hoose oo u qalab qaatay la dagaallanka AMISOM
23 September 2021 Ajaanib ka tirsanaa Al-Shabaab oo maxkamad xukuntay
Maamulka Soomaaliland ayaa xabsiga utaxaabay Fannaan da' yar oo lagu magacaabo Qamar Suugaani, kaasoo maalmahan aad uga soo muuqanayay masraxyada Soomaalida.
BERBERA - Soomaaliya: Ciidamada ammaanka soomaaliland ayaa xabsiga utaxaabay fannaanka lagu magacaabo Qamar Suugaani, inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin hadal kasoo baxay laamaha amniga oo ku saabsan sababta xariga fannaanka Qamar suugaani haddana waxaa lala xiriirinayaa safar uu dhawaan kaga soo laabtay magaalada muqdisho oo uu bandhig faneed isaga u gaara kasoo muuqday.
Qamar suugaani ayaa markii uu soo gabagabeeyay safarkiisii muqdisho waxa uu usii gudbay magaalada Garoowe halkaasoo safar dhulka ah uu doonayay inuu kaga galo magaalada Hargeysa, waxaana intii uu sii maryay magaalada Berbera lagu qabtay fannaanka, kaddibna waxaa loo taxaabay xabsiga, inta badan fannaaniinta reer Hargeysa ee magaalada muqdisho u aada in ay bandhig faneed kaga qeyb galaan waa la xiraa, waxaana loo maleenayaa xarigan in uu la xiriiro booqashadiisii magaalada Muqdisho.
Xarigga fannaaniinta iyo saxafiyiinta waa isugu mid maamulada ka jira magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho, toddobaad kahor waxaa muqdisho lagu xiray wariye ka howl galayay magaalada muqdisho, sidoo kale gabar saxafiyad ah ayaa iyana la xiray xilli ay ku guda jirtay shaqadeeda warbaahineed, sidoo kale fannaan Qamar Suugaani ayey ciidamadu ka kaxeysteen maanta meel fagaaro ah, iyadoo lagala dagay gaarigii uu saarnaa.
Iridda laga ilaaliyo Madaxtooyada oo la qarxiyay
Warar 25 September 2021 11:28
Goobta Qaraxu ka dhacay ayaa ah agagagaarka isgoyska Ceelgaabta ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku yaallo bar koontarool oo laga ilaaliyo Madaxtooyada. Koontaroolka lala beegsaday qaraxa is-miidaaminta ah ayaa lagu hubiyaa gawaarida galeysa Villa Soomaaliya.
Warar 25 September 2021 11:11
Dacwad ka dhan ah Farmaajo oo loo gudbiyay Maxkamadda ICC
Warar 25 September 2021 10:30
Doorashadii HirShabeelle oo u istaagtay rabitaan shaqsi
Warar 25 September 2021 10:21